Muwaadiniinta reer Iswiidhan oo looga digay ineey u safaraan dalal ay Soomaaliya ku jirto | Somaliska
Muwaadiniinta reer Iswiidhan oo looga digay ineey u safaraan dalal ay Soomaaliya ku jirto
Stockholm/wakaaladaha (Somaliska) Wasaaradda arrimmaha dibadda Iswiidhan ayaa muwaadiinteeda uga digtay dalal ay Soomaaliya ka mid tahay ineey u safraan. Qoraal laga soo saaray wasaradda ayaa lugu sheegay in muwaadiinta ay ka digtoonaadaan u safrida iyo iskaga kala gudbida xuduuda Itoobiya ay la wadaagto Ereterya, Keenya, koonufrta Suudaan iyo Soomaaliya.
Qoraalka ayaa sidoo kale lugu sheegay in xudduudaha dalalka Itoobiya iyo Ereteriya aaneey 10 kilo miter u dhawaan sababo la xirriira ammaan xumo halkaas laga soo shaagayo. Sidaas si la mid ah ayaa lugu yiri qoraalkaasi in aan xudduudaha,Keenya iyo koonfurta Suudaan aan 10 kilo miter loogu durkin. Ugu dambeyntiina waxaa qoraalka looga digay dhamaan goboladda Soomaaliya ineey gaaraan muwaadiniinta Iswiidhish-ka ah ee howlaha kala duwan ka haya gobolka Geeska Afrika.
Qoraalka digniinta ah ee wasaaradda ayaa imanaya xilli ay abaaro ba’an ay ka jiraan gobolka Geeska Afrika, Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka uu sida weyn qeybo ka mid ah u saameeyey abaartaas qarkana ay u saaran yihiin macluul.
Bog la yaab leh oo dhalinyaradda loogu talagalay oo dowladda hirgelisay